Waa maxay sababta ay Barcelona ugu qasban tahay iney iska iibiso midkood Vidal, Arthur Iyo Malcom si ay Neymar ula soo wareegto? – Gool FM
(Barcelona) 5 Luulyo 2019. Waxaa jira arrimo badan oo isku cakiran isla markaana is hortaagaya in Neymar Junior dib ugu soo laabto Barcelona, mid ka mid ah waa ciyaartoyda koonfurta America kasoo jeeda ee ku sugan garoonka Camp Nou.
Neymar Junior wuxuu dalbaday inuu helo dhalashada Spain si uu u helo baasaboor yurub ah, balse iyadoo la joogo gabagabada howsha uu ku heli lahaa ayuu ku biiray kooxda Paris Saint Germain bartamahii 2017, waxeyna taasi dhalisay in waaxda ku shaqada leh ay gabi ahaanba joojisay horay u socodka arrintaas.
Kaliya saddex xiddig oo aan heysan baasaboor yurub ah ayaa loo ogol yahay Barcelona, waxaana hadda ku sugan kooxda Arthur Melo (Brazil), Arturo Vidal (Chile) iyo Malcom Filipe (Brazil) oo aan dhamaantood heysan baasaboor yurub ah, sidaas darteed suurogal maahan inuu Neymar kusoo biiro Balaugrana iyadoo ay saddexdaas kooxda ku sugan yahiin.
Mid ka mid ah saddexdaas ciyaartoy ayey tahay inuu daaqada ka baxo, waxaana loo badinayaa Malcom Filipe oo dhawaan lacago badan ku yimid Camp Nou, waxaa sidaas loo leeyahay Arthur Melo iyo Arturo Vidal waxey qeyb libaax leh ku leeyahiin qorshaha Ernesto Valverde.
Waxaa jira kooxo badan oo xiiseynaya 22-jirka reer Brazil (Malcom), waxaana ka mid ah Arsenal oo ku dooneysa iney qaab amaah ah ku hesho.